FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SHIKOKU - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Shikoku
'Ahi dia iray amin'ireo alika azonao ananana indray mandeha monja amin'ny fiainanao fa tena miavaka izy. Izy dia henjana toy ny hoho ary feno toetra. Mampiseho ny toetra rehetra antenainao amin'ny karazany taloha toa ny Shikoku-Ken izy. Azony atao ny mampiseho ny fihetsika hentitra indrindra ary avy eo dia mihodina ary ho zanak'alika mamy indrindra nifanena taminao. Tena tsy mivadika aminay izy, nefa koa tia ny ankamaroan'ny olona, ​​na dia manana 'fahatsapana fahenina' koa aza izy rehefa matoky olona. Ahi dia 1,5 taona amin'ity sary ity. '
Ny Shikoku dia manana palitao matevina, avo roa heny, sofina miorina, rambony miforitra, tongotra maranitra, ary manana endrika maranitra kokoa noho ny karazana Japoney sasany. Tahaka ny Akita, ny Shikoku dia manana manaikitra hety. Ny masony dia volontsôkôlà mainty, miendrika amandy ary milentika. Ny lokon'ny akanjo dia mena, sesame mena ary sesame mainty na mainty.
Ny Shikoku dia mifamatotra mafy amin'ny natiora. Mitandrina sy be herim-po ny alika mahay mandanjalanja ary mahay mandanjalanja. Ny Shikoku koa dia tena tsy mivadika ary manoa ny tompony tiany ho voakitika ary matetika te-hanoroka. Na izany aza, mety ho somary miavaka amin'ny olon-tsy fantatra izy io. Mila an'io karazana io -piaraha-monina mialoha mba tsy hasiaka amin'ny alika hafa. Ny alika lasa mpihetraketraky ny alika dia mila tompona / mpanazatra mahay mahay mahay miresaka amin'ny alika fa fihetsika tsy ekena izany. Shikokus dia afaka mihavana amin'ny ankizy raha tezaina tsara sy ny mifamadika amin'izany. Manana mpamily haza lavalava izy ireo ary noho izany dia mety tsy ho an'ny olon-drehetra dia tsy tokony hatokisana biby tsy kaninina toy ny guinea pig sy hamsters. Satria mpihaza voajanahary izy ireo, dia mety tsy ho voaro tsara ny biby kely any an-tokontany. Shikokus dia tena marani-tsaina ary mianatra haingana. Mila izy ireo fitarihana mafy orina, azo antoka ary tsy miova avy amin'ny olona manodidina azy ireo na hanjary ho mafy loha izy ireo ary tsy hiala sasatra amin'ny fihetsika sy lalao. Na izany aza, voalaza fa alika mora tantanana kokoa noho ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy izy ireo. Mazava ho azy fa mianatra, hoy ny tompona iray: 'Tena te hianatra izy ireo! Fantatry ny alikako hipetraka toradroa tanteraka mandritra ny 9 herinandro. Tena ho faly izy rehefa mahita ahy mamoaka ny clicker. ' Haingam-pandeha izy ireo ary mailamailaka ary mety ho tsara amin'ny fahazotoana na fankatoavana. Ny fahamalinan'ny Shikoku dia mety hahatonga azy io ho mpiambina fianakaviana tsara. Ny pups Shikoku dia mety ho be feo indraindray. Manana fofona be izy ireo, izay manampy azy ireo amin'ny fanarahana ny karierany. Mangina ao an-trano, ny Shikoku tia manao fanatanjahan-tena any ivelany ary tena matanjaka. hifanerasera tsara rehefa tanora fanofanana fankatoavana no atoro anao.
Hahavony: 7 - 21 santimetatra (46 - 52 cm)
Lanja: 35 - 50 pounds (16 - 26 kg)
Tsy nisy nanamarika
fifangaroan'ny pincher maltese sy kely indrindra
Mangina izy ireo ao an-trano, fa tia hetsika ivelan'ny trano. Tsy ho faly lavitra ny tompony izy ireo. Tokony hanana tokotany fefy i Shikokus, satria mihaza alika voajanahary miaraka amina fofona maimbo sy mety hiainga amin'ny mandehandeha izy ireo.
Ny Shikokus dia manao fanatanjahan-tena tsara indrindra ilain'izy ireo isan'andro MANDEHANA na jogging. Aza avela handeha malalaka ity alika ity amin'ny faritra tsy azo antoka. Manana fivezivezena haza be izy ireo ary mety hahita olana, izany hoe voadonan'ny fiara rehefa manenjika biby. Alika marefo sy atletika izy ireo ary mampiseho fahaiza-manao izay mety hahatonga azy ireo manan-talenta amin'ny hakingana na mety ho fanarahana fankatoavana.
Alika kely 5 ka hatramin'ny 7
Mitsoka palitao indray mandeha na indroa isan-taona izy ireo. Ny sakamalao ambany vita amin'ny akanjo lava dia mahatonga ny fikolokoloana ho mora. Ny fandroana tafahoatra dia mety hahamaina ny hoditr'izy ireo ary noho izany ny fandroana isam-bolana vitsy dia matetika. Tsy manana fofona alika mahery izy ireo.
Ny Shikoku dia fantatra koa amin'ny anarana hoe Kochi-ken 'ken' na 'inu,' izay midika hoe alika amin'ny teny Japoney. Kin hatramin'ny kely kokoa Shiba ary lehibe kokoa Akita Inu , ny Shikoku-Ken dia karazana alika tsy fahita firy, na dia any Japon tanindrazany aza. Tamin'ny 1937, ny Shikoku dia naorina ho iray amin'ireo harem-pirenena Japon. Namboly ny Shikoku ny Japoney mba hihaza diera sy lambo dia any amin'ny prefektioran'i Kochi be tendrombohitra sy mitoka-monina any amin'ny nosy Shikoku. Shikokus dia sasany amin'ireo karazana alika madio indrindra noho ny toetran'ny faritra lavitra, izay tena namepetra ny fiampitana.
ARBS = Fikambanana Amerikanina tsy dia fahita firy
JKC = Club Kennel Japoney
'Tena mamy i Loa izay hany tiany hatao dia ny manoroka sy milalao. Milalao tsy an-kijanona izy dia toy ny zazakely Energizer! Antsoinay hoe 'Loeybear' izy satria toy ny bera teddy, malefaka sy mamy tokoa. Mahalana no mivovo i Loa, raha ny marina dia mbola tsy maheno ny hodiny mihitsy isika ... mikofokofoka toy ny vorona izy, na indraindray aza midradradradra. Tena tsara izy miaraka amin'ny alika hafa, izay tsy toetra mahazatra an'i Shikoku-Ken. Sasatry ny vahiny izy, fa rehefa avy manafana anao izy dia oroka be dia be. 8 volana i Lao amin'ity sary ity. '
Ahi sy Loa ny Shikoku-Kens
Loa the Shikoku-Ken amin'ny maha alika kely azy
'Ronan (Kochi-Ken Choi Iki an'i CKC Akashima) dia lehilahy sesika mena. Miorina amin'ny taranany izy ary mahery fo, be fitiavana ary manan-tsaina. 12 herinandro izy tamin'ity sary ity. '
pitbull orona mena sy fifangaroan'ny laboratoara
fampahalalana momba ny alika husky siberianina
tahaka ny ahoana ny bulldogs